Dawlada France oo ka hadashay weerarkii askarta looga laayay Amisom. – Balcad.com Teyteyleey
Dawlada France oo ka hadashay weerarkii askarta looga laayay Amisom.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibada dalka France ayaa waxa ay kaga hadashay weerarkii lagu dilay 12 askari oo Uganda u dhashay isla markaana lagu dhaawacay 9 kale kaasi oo ka dhacay deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha hoose .
Dowladda France, ayaa muujisay sida ay kaga xun tahay Khasaaraha ciidamada Amisom weerarkaasi ka soo gaaray, waxaana wararka ay sheegayaan in Amisom inta ay qiratay in ka badan weerarkaasi looga dilay.
“Waxa aan aad u kordhinaynaa cambaareynta weerarkaa waxaana murugada la qaybsanaynaa dowlada Uganda.” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay France.
“Waxaan bogaadinaynaa hawsha adag ay haayaan ciidamada ka socda Uganda ee qaybta ka ah hawlgalka nabad ilaalinta ee Amisom,taasi oo ka dhigan in ka badan 6,000 oo ciidamo ah ay ka socdaan Uganda,isla markaana qayb ka ah 22,000 askari kuwaasi oo Somaliya u jooga in ay nabad ka dhigaan.” ayaa lagu sii daray warka qoraalka ah ee kasoo baxay dalka Faransiiska.
Sidoo kale waxa aan mar walbo garab taaganahay dowladda Somaliya iyo Midowga Afrika dagaalka ay kula jiraan kooxaha Argagaxisada ayaa lagu soo gaba gabeeyay warka kasoo baxay xukuumadda Faransiiska.
30-kii bishii July ayey aheyd markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen kolanyo ciidamo ah oo Amisom ah oo maraayay deegaanka Golweyn oo ku yaal inta udhaxaysa Shalaanbood iyo Baraawe.
Shabaab ayaana sheegtay weerarkaa in ay ku dileen in ka badan 39 askari oo Amisom ah balse Amisom iyo dowladda Uganda oo ka hadlay ayaa sheegay in weerarkaa ay ku dhinteen 12 askari halka ay ku dhaawacmeen 9 kale.
The post Dawlada France oo ka hadashay weerarkii askarta looga laayay Amisom. appeared first on Ilwareed Online.
It is believed that the Commander of Al-Shabaab in Benadir, Ali Jabal is killed in an operation